El Patache Beach House kunye Jacuzzi, Punta Rubia - I-Airbnb
El Patache Beach House kunye Jacuzzi, Punta Rubia
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMartín
Indlu ePunta Rubia kufuphi neLa Pedrera, i-100 yeemitha ukusuka elunxwemeni. Kukulungele ukuphumla nosapho okanye nabahlobo, kunye neJacuzzi kunye nesitovu somthi. Ipatiyo enelanga kunye nebarbecue egqunyiweyo. Nge-alarm yangaphakathi nangaphandle
Indlu yakhululwa ngo-Agasti ka-2021, kunye nazo zonke izibonelelo zayo ukuya kwi-zero, ifuna ukunika abaqeshi bethu intuthuzelo enkulu ngexesha lokuhlala kwabo, apho sicela intsebenziswano ekunyamekeleni kwayo ukugcina inkonzo.
Indawo yokuhlala ibonelela ngebhedi KUPHELA, izinto zokucoca, iphepha langasese kangangeentsuku ezimbalwa, isepha yesandla kwigumbi lokuhlambela kunye nesepha ekhitshini ASINIKEZI iitawuli, ii-condiments, isepha yomatshini wokuhlamba, nceda ubuze xa uthandabuzayo.
Indawo ezolileyo kakhulu, ilungele ukuphumla nosapho !!
Umbuki zindwendwe ngu- Martín